Wafdi Xaldoon Ah Kana Socday Aqalka Sare Oo Gaaray Kismaayo – Kalfadhi
Wafdigaan maanta gaaray magaalada Kismaayo waxaa hor kacaayay sanator Axmed Xaashi Maxamuud waxaana ay qeyb ka yihiin guddigii Aqalka Sare ugu saaray inay xog badan ka keenaan khilaafka kala soo dhex galay maamul gobolleedyada dalka iyo dowladda federaalka.
Wafdiga oo 10 xubnood ka koobnaa ayaa waxaa kaga hortagay garoonka Kismaayo guddoomiyaha Barlamanka Jubbaland iyo xubno ka tirsan wasiirrada Jubbaland.
Ujeedka ugu muhiimsan socdaalkooda ayaa ah inay soo xogwareystaan madaxweyne Axmed Maxamed Islam iyo tabashada maamulkiisa ka qabo xiriirka dowladda federaalka.
Aqalka sare ee Soomaaliya ayaa guddi xal u raadin iyo dhameenta khilaafka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad gobolleedyada sameeyay kuwaasi oo billaabay inay tagaan magaalo madaxyada dowlad gobolleedyada dalka waxana ay haystaan mudo 10 cisho ah oo laga doonayo inay warbixintooda kusoo uruuriyaan.
Kalfadhi wararka ay ka halayso magaalada Garowe ayaa sheegaya in wafdigii uu hogaaminayay senator Cabdiraxman Faroole durba ay la kulmeen madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland,Golaha Wakiilada Puntland iyo waliba qaar ka mid ah Bulshada rayidka iyagoona kala hadlay arrimaha haatan taagan iyo sida ugu fudud ee lagu xalin karo.